7 dhibaato oo dhaxal wareejis ah oo ay siyaasiyiinta & ganacsatadu Somalia ku hayaan! | Hadalsame Media
Home Maqaallada 7 dhibaato oo dhaxal wareejis ah oo ay siyaasiyiinta & ganacsatadu Somalia...
7 dhibaato oo dhaxal wareejis ah oo ay siyaasiyiinta & ganacsatadu Somalia ku hayaan!
(Hadalsame) 15 Luulyo 2020 – Guud ahaan dhulka Soomaalida waxaa soo gasha hanti aad iyo aad u badan. Dunidu wax ay ku deeqdaa dhaqaale badan oo lacag iyo caawimo kaleba ah. Qurbajoogtu lacag aad u badan bay dalka galisaa. Gudahana dhaqaale xooggan baa ka soo baxa. Laakiin lacagtaas ka ma muuqato kaabayaasha dhaqaale ee dalka iyo nolol maalmeedda bulshada, welina Soomaalida badankeedu ma haysato wax ay cunto iyo biyo ay cabto. Waayo?
Ma jirto siyaasad dhaqaale, gobolnaba, waxaa se jirta siyaasad maafiya. Deeqaha shisheeyuhu bixiyo badankoodu wax ay galaan jeebabka kooxo gaar ah. Ganacsiga waaweyni si wal oo loo eego waa ganacsi aan sharci ahayn oo ku shaqeeya xeerka maafiyada, waayo waxa dalka la keenayo, cidda keenaysa, meesha la ga keenayo, sida loo lacagaynayo, tafaariiqaynta iyo sicirka suuqa intuba bilow ilaa dhammaad wax ay ku socotaa xeerka budhcadnimada.
Arrimahani Soomaalida wax ay u soo jiideen:
1. In la waayo bangi dhexe oo dhab ah, hay’ad maaliyadeed oo heer qaran ah oo shaqaysa, aqoon iyo khibrad dhaqaale oo talisa ama wax la wayddiiyo, iyo guud ahaan siyaasad dhaqaale oo wax ka la hagta.
2. In ay abuuranto maafiya dhaqaale-siyaaasadeed is ku xidhan oo wada shaqaysata.
3. In dad aad u tiro yari yeeshaan hanti aad u badan oo aan xalaal ahayn, halka ay dadka intoodii badnayd caydhoobeen oo noloshoodu horumari wayday.
4. In warqado Shilin ah oo aan qiimo dhaqaale lahayn dadka loo daabaco oo hantidooda dhabta ah la ga ga furto.
5. In lacagta adag badankeedu iyada oo caddaan ah si budhcadnimo ah debedda u qulqusho oo dhulal shisheeye la dhigto.
6. In maalgashiga dalka iyo waxsoosaarka guduhu curyaamaan, dhaqaalaha dalka oo dhamina ku wareego badeecado shisheeye oo la rogrogo, xitaa khudradda la cunayo.
7. In qofka muwaaddinka ahi waayo sharci u ilaaliya xuquuqdiisa dhaqaale oo ka difaaca shirkadaha iyo ganacsatada maafiyada ah, uuna u baylaho budhcad wal oo dhac iyo boob u taagan.
Xaaladahan oo kale ayay ka soo baxaan kacdoonno iyo qalalaase waaweyn oo wax beddela. Waxaana la joogaa goortii dadku kici lahaa.
Waxaa Qortay: Ibraahim Hawd-yuusuf
Previous articleGarsoore Soomaaliyeed oo HIILLO wax ku ool ah u sameeyey dalka Qadar (Sucuudiga & Imaaaraadka oo…)
Next articleGOOGOOSKA & SAWIRRADA: AC Milan vs Parma 3-1, Man City vs Bournenouth 2-1, Bologna vs Napoli 1-1